दिव्यश्वरी हाइड्रोको सेयर असार १३ देखि भर्न पाइने, कहाँ पाइन्छ त फारम ?
काठमाडौं । दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण सेयर असार १३ देखि बिक्री खुला हुने भएको छ ।
कम्पनीले एक सय रूपैयाँ अंकित मूल्यमा तीन लाख ९६ हजार कित्ता साधारण सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । यसमध्ये कर्मचारीलाई सात हजार नौ सय २० कित्ता छुट्याइएको छ भने सामूहिक लगानी कोष कम्पनीहरूलाई १९ हजार आठ सय कित्ता दिइएको छ ।
लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० देखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म भर्न पाउनेछन् । संखुवासभा जिल्लामा पर्ने यस हाइड्रोपावरले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर वितरण गरिसकेको छ । सर्वसाधारणलाई जम्मा १५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न लागिएको हो ।
कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । जसअनुसार वर्षायाममा ४.८० पैसा र हिउँदमा ८.४० पैसा प्रतियुनिट कायम भएको छ । यो दरमा पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतले महसुल दर वृद्धि हुनेछ ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५६ करोड, जारी पुँजी २६ करोड र चुक्ता पुँजी आइपीओ निष्कासनपछि २६ करोड ४० लाख पुग्नेछ । दिव्यश्वरीको आइपीओमा बिक्री प्रबन्धकको काम एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मै नेटवर्थमा ६.२६ प्रतिशत औसत प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाल कम्पनीको नेटवर्थ नकारात्मक छ ।
कहाँकहाँ पाइन्छ फारम भर्न र बुझाउन ?
–एस क्यापिटल लिमिटेड - नक्साल
–एस डेभलपमेन्ट बैंक - शाख कार्यालयहरू
–त्रिवेणी विकास बैंक - इटहरी र बिराटनगर
–एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक -विर्तामोड, झापा
–गरिमा विकास बैंक - महेन्द्रपुल, कास्की
–मालिका विकास बैंक - नेपालगन्ज, धनगढी
–महाकाली विकास बैंक, - कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर, कैलाली, धनगढी